Madaxweynaha Kenya oo ka hadlay go’aankii Maxkamadda Sare | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Kenya oo ka hadlay go’aankii Maxkamadda Sare
Madaxweynaha Kenya oo ka hadlay go’aankii Maxkamadda Sare
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shir jaraa’id uu ku qabtay xarunta Madaxtooyada magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu kaga hadlay go’aankii Maxkamadda Sare ee dalkaasi ay ku sheegtay in dib loogu laabanayo Doorashadii 8-dii bishan.
Waxa uu sheegay Madaxweynaha Kenya in uusan ku qanacsaneyn go’aankii Maxkamada Sare ku laashay guushii uu ka gaaray Raila Odinga, taasi oo ku tilmaamay waxba kama jiraan, balse uu tixgelinayo sharciga dalka.
Mr. Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in uu diyaar u yahay Doorasho ku celis ah oo dalka ka dhacda isagoo dhanka Mucaaradka ugu baaqay in ay diyaar garoobaan, oo markale aysan andacoon.
Madaxweynaha Kenya oo garabkiisa uu taagnaa ku xigeenkiisa William Ruto ayaa ku booriyay Kenyaanka in ay darisnimada ilaaliyaan nabadna ay ku wada noolaadan.
Madaxa Cadaalada dalkan Kenya Mr. David Maraga ayaa ku dhawaaqay go,aanka Maxkamada Kadib dhageydiga dacwadan oo socotay Sadexdii maalin ee la soo dhaafay, waxaana uu amray mudo Lixdan maalmood ah in lagu qabto Doorasho cusub.
Dhanka kale Hoggaamiyaha ugu weyn ee mucaaradka Kenya ahna Musharaxii u tartamayay doorashadii 8 August Raila Odinga ayaa soo dhoweeyay go’aanka ay Maxkamadda sare ee Kenya ku baabi’isay natiijadii doorashadii Madaxweynaha.